Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira
Home AFRIKA CARUURTA FOOTBALL Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Ivory Coast Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira
LB waxa ay soo bandhigtay sheekada Full Story ee Kubadda Cagta ee ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; 'Mr T'. Our Cheick Tiote Carhood Story Story iyo Xogta Lahaansho Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ka mid ah dhacdooyinka la arki karo waqtiga ilmihiisu ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Kaga bilow.
Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira -Sanadaha Hore
Cheick Tiote Photo Childhood
Late Cheick Ismael Tioté wuxuu ku dhashay 21 June 1986 Yamoussoukro, caasimadda Côte d'Ivoire by waalidkiis, Mr Mr iyo Mrs Toite. Waxa uu ku qancay magaalada Shanty ee saboolka ah ee saboolka ah, ee ku yaal Yamoussoukro. Wuxuu sheegay in tani ay tahay waxa uu aaminsan yahay isaga oo xoog leh.
Wuxuu ka soo kicitimay rabshad dhiig leh oo burburiyey tuuladiisa oo u horseeday dhimashadii waalidka.
Ka dib dhimashadii waalidkiis, Tiote waxay ahayd in uu u guuro degaanka Abidjan oo loo arko magaalo ammaan ah. Waxa uu qirtay inay ahayd magaalada uu ahaa kii u horseeday kubada cagta.
Wuxuu bilaabay inuu ciyaarayo barefoot kubada cagta marka da'da 10, oo aan laheyn labo ka mid ah kabaha iyo mararka qaar isticmaalaya furayaasha ilaa uu ka ahaa 15.
Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira -Dhimashadiisa
Galabtii Isniinta, June 5, 2017 dhamaan caruurnimada kubada cagta ayaa lagu tuuray naxdin iyo murugo ka dib dhimashadii ugu dambeysay ee Ivorian iyo xiddigii hore ee Newcastle United Cheick Tiote. Soo sheeg siinta LifeBogger.com wuxuu sharaxayaa in khibrada Cheick Tiote uu u geeriyooday da '30 ka dib markii uu ku dhacay tababarka kooxda shirkadaheeda Beijing. Nasiib daro, waxaa la sheegay in uu rajeynayo ilmo cusub maalmo yar kadib markii uu geeriyooday, laakiin waxa uu soo maray sadex carruur ah kahor inta uusan dhiman.
Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira -Ku kalsoonaanta Dhakhaatiirta Witch si ay u bogsadaan dhaawacyada
Su'aalo badan ayaa la kiciyey tan iyo markii uu maqlay geeridiisa. Sida ... Maxay ku dishay Cheick Tiote?
Waxaa jira warar sheegaya in sida Witch Doctors u dishay Cheick Tiote. Waad ka yaabi kartaa arrintan haddii aadan waxba ka ogeyn taariikhdiisa.
Waa arrin ku haboon in la ogaado in xiddiga khadka dhexe ee daafaca ah uu heysto caado uu ku kalsoon yahay inuu ku takhasuusan yahay garoomada kubadda cagta. Waxa uu sheegay in dhakhaatiirta saxda ah ay mar hore u bogsadeen markii uu ku dhibtooday dareeraha jilibka midig taas oo keentay xanuun iyo xayiraad dhaqdhaqaaqiisa. Ka dibna Newcastle, Tiote ayaa loo isticmaalay inuu fasax ka qaato milkiilaha Magpies Mike Ashley inuu ku soo laabto Ivory Coast si uu u arkaan saaxibadiisa.
Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira -Nolosha Qoyska
Tioté wuxuu ka yimaadaa qoys diin ah oo Muslim ah. In wareysi lala yeesho Newcastle Xilliga Habeenka, Tioté wuxuu sheegay in uu haystay sagaal walaalo ah. Kobcinta Abiigaan, wuxuu waxbarashadiisa sii waday da 'yar, isagoo tilmaamaya,
Halkee Cheick Tiote Grew Up
"Kubada cagta marwalba waxay aheyd wax iigu weyn. Horumarinta magaalada Abyan ugu xun Shanty, waan ogaa waxa aan doonayo inaan sameeyo oo aan hubiyo in tani ay noqoneyso nolosheyda. Hase yeeshee, waan shaqeeyay, shaqeeyay, waxaan u shaqeeyay, waana sababtaas awgeed shaqadan adag ee aan ku guulaystay. "
Waxa uu taageeraa shan walaalo iyo sadex gabdhood oo walaalo ah oo uu mar hore ka soo qaatay kubada cagta.
Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira -Nolosha Xiriirka
Waxa uu leeyahay laba carruur ah oo leh xaaskiisa hore, Madah. Waxay ku noolaayeen guri ku yaal 1.5million oo ku yaala Ponteland meel u dhow Newcastle.
On 29 September 2014, waxaa lagu soo wariyay Newcastle Chronicle in Tioté guursaday xaas labaad, Laeticia Doukrou, oo ku taal caasimadda Ivory Coast, Abidjan.
Guurka ayaa la qabtay ka hor bilowga xilli. Wakiilka wakiilka Jean Musampa, ayaa xaqiijiyay guurka wargeyska maxalliga ah, isaga oo sheegay "Waxaan dhihi karaa wuu guursaday, waana guurka labaad".
The Sun ayaa soo warisay in xaaskii ugu horeeyay uu ahaa 'raaxo marka ugu horeysa' isaga oo guursanaya laakiin markii danbe go'aansaday in uu waco xiriirka maxaa yeelay waxay sheegtay in erayadeeda 'Wuxuu u aaday inuu la kulmo hooyaday oo u sharaxay sababta uu u baahan yahay inuu helo xaas kale. Wuxuu iigu adeegsaday boodh. Waa doofaarka '.
Muddo yar ka dib, waxaa la soo wariyay in uu wax walwal leh ku dhameeyay ninkeeda oo lagu magacaabo Nikki oo u dhashay ilmo uuna u magacaabay Raphael.
Markii lagu dhaleeceeyay xaaskiisa 2 iyo gabadh, waxaa la siiyay ciyaaryahankii khadka dhexe ee Newcastle Cheick Tiote si dhaqso ah uu ugu difaacay qaab nololeedkiisa. "Waxaa jira wax aan caadi ahayn oo ku saabsan in uu leeyahay laba xaas iyo gabadh."
Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira -Ku dhowaaday xabsiga
Bishii Oktoobar 2013 Tiote nasiib ayay nasiib u tahay in laga fogaado xabsiga ka dib markii uu qirtay in uu haysto liisanka baabuurta been abuurka ah iyo cabitaanka sidoo kale.
Waxaa la siiyay 7 bilood oo ganaax ah iyo saacadaha 180 ee shaqo la'aanta bulshada. Garsooraha James Goss ayaa sheegay in Tiote, 27, laga reebay xabsiga kaliya sababtoo ah wuxuu qirtay dembiga.
Garsooruhu waa inuu ka baxo, isagoo leh: 'Shaki iigama jiro in, adigoo isticmaalaya tayadaada aadka u weyn, waxaad awoodi doontaa inaad ka caawiso dadka kale bulshada dhexdeeda adigoo ku dhiirigelinaya kuna gudbinaya xirfadahaaga habkaas.'
Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira -Hantida Ganacsiga Khadadka Dharka ee Nigeria
Bishii Febraayo 2014, Tioté ayaa soo bandhigtay taxane ragga ah ee ragga ah oo uu ugu yeeray TIC, oo leh naqshadeeye Yusuf Abubakar, oo ah nin Nigerian ah oo u maamulay isaga.
Sida laga soo xigtay Akubakar; "Tiote waa mid aad u fiican oo hoos ugu dhaadhaca wiilka. Markaan la kulmay isaga waxaan ahaa xiddigtii dhabta ahayd laakiin wuu fiicnaa. Marar badan ayuu iigu yeedhaa aniga maamulaha, xitaa waxaad ka shaqeysaa isaga. Waxaan u shaqeynayaa isaga oo aan la yaab leh. Waxa uu qaadaa waxa aan dhaho, si fiican ayuu u shaqeeyaa. "
Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira -Xirfadda Soo-koobista
Wuxuu xirfadiisa ciyaareed ku bilaabay kooxda reer Ivory Coast ee FC Bibo. 2005, waxa uu daawaday kooxda Belgian ee Anderlecht, ka dib markii uu kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay Anderlecht kulankii Belgium Cup oo ay guuldarro ka soo gaartay Geel. 2007-08 xilli ciyaareedkii ayuu amaah ugu ciyaaray Roda JC si uu ugu biiro Ex-FC Bibo iyo saaxiibkiisa kooxda Feyenoord Sekou Cissé. 2 October 2008 Cheick Tioté ayaa u saxiixay kooxda reer Holland Eredivisie horyaalka FC Twente lacag lagu soo waramayo inay ku dhow yihiin € 750,000. Waxa uu ku guuleystay horyaalka Holland xilli ciyaareedkan 2009 / 10, waxaana sidoo kale ku jira Europa League iyo Champions League. Tioté ayaa ku biiray kooxda horyaalka Premier League ee Newcastle United oo ku biirtay 26 August August 2010 lacag gaareysa £ 3.5.
Cheick Tiote Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira -Lifebogger Rankings
Waxaan soo bandhignaa rikoodhka guusha wiilka da'da yar ee Tiote.
Didier Drogba Da 'Yaabka Sheeko Xogta Warka Xogta Leh